TIGER EYEOPERATION UYE ZVINONZI MUDZIMU - Matombo Uye Zvicherwa
maitiro ekuita zvakavanzika nhamba pa iphone
zvinorevei data remagetsi
gadziridza marongero ekutakura iphone 5s
TIGER ZISO: KUSHANDISA NOKUDZIDZA MUDZIMU
Tiger Ziso kristaro inozivikanwa nekuda kwekuzivikanwa kwayo uye kunoshamisa kwechiedza. Ziso reTiger rine akasiyana akasiyana, senge chrysoberyl uye ziso regondo. Ziso reTiger ikristaro inozivikanwa yekugadzira zvinhu zvekushongedza. Iyi kristaro yekudzivirira uye yekumisikidza ine maitiro akanaka pane, pakati pezvimwe zvinhu, hunyanzvi system.
Iyo inodzivirira yako aura kubva kune yakashata pesvedzero uye inopa yakawanda yekuzviongorora. Iyi kristaro yakakodzera vana kubva pamakore matanhatu ekuberekwa. Iyi kristaro inokwana mapoka enyeredzi Leo neGemini uye inomutsa chakra chakakosha uye iro rezuva plexus chakra. Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve mhedzisiro uye kukosha kwemweya kweziso reingwe mune ino chinyorwa.
Tiger ziso rekristaro muchidimbu
Ziso raTiger igoridhe-shava kune red-brown kristaro iyo inowira pasi pemhuri yequartz. Ziso reTiger rine mwenje unoratidza mukristaro. Ziso reTiger rinewo mamwe mafomu, senge iro ziso regondo. Ziso renhema rinodaidzwa zvakare kuti zveruvara rwebhuruu uye ndere bhuruu-grey musiyano weziso reingwe. Imwe inozivikanwa inozivikanwa yeziso reingwe ndeye chrysoberyl, inozivikanwawo seziso rekati.
Iyi yero misiyano yeziso reingwe. Ziso dzvuku rembada rinoitawo musiyano unozivikanwa weziso reingwe, iro rinonziwo ziso renzombe. Ziso reTiger iquartz ine iron, ichigadzira hunhu uye kuratidza. Nekuda kwemusiyano weyakaunganidzwa wedare uyo ziso rengwe rine, iwo akasiyana mavara maronda akagadzirwa.
Ziso reTiger rave richishandiswa mukati memazana emakore ekugadzira zvinhu zvekushongedza. Zita rekuti tiger ziso rinokonzerwa neyakajeka mwenje mhedzisiro uye inozivikanwa yegoridhe yero yero yekristaro. Iko kusanganiswa kwemuvara uye kwechiedza chiitiko dzimwe nguva kunoyeuchidza mumwe weziso reingwe.
Ziso reTiger ibwe rakakodzera kuvana kubva pamakore matanhatu ekuberekwa.
Zvishandiso Tiger ziso
Ziso reTiger ikristaro yakakurumbira yaunogona kupfeka mumuviri wako kana kupfeka mune dzako nguo. Tiger ziso zvakare ibwe rakakodzera kuisa pamusoro pemuviri unoda kutariswa. Izvo zvakafanana zvinokwanisika kuvhura uye kukurudzira iyo yakakosha chakra uye solar plexus chakra.
Tiger ziso rinoshandiswa kukwiza muviri, gemstone therapy uye kufungisisa. Tiger Ziso rinogona zvakare kushandiswa mushe panguva yebvunzo, bvunzo kana yekushandisa panguva yekudzidza. Iyi kristaro inonyatso kumutsa hunyanzvi hwekuongorora. Ziso reTiger rinogona zvakare kushandiswa kugadzira mushonga. Semushonga, inokurudzira uropi uye inodzivirira ino kristaro kubva kune zvakashata zvinokanganisa.
Ziso reTiger rinogona kucheneswa uye kuchinjwazve munzira dzese.
Kunamata pamwe nenhoroondo
Ziso reTiger rave riri dombo rinodiwa kwemazana emakore. Tinogona kutotungamira ziso rengwe kudzokera kuGreek Greek. Ivo vakashandisa ino kristaro kune yakanaka mamiriro uye kusimbisa pfungwa. Ivo zvakare vaitenda kuti kristaro iyi yaizovachengetedza kubva kune zvakashata zvekunze zvinofurira.
MuMiddle Ages zvaifungidzirwa kuti ziso rengwe raizodzivirira pamashiripiti, senge rakaipa ziso. Kwete chete ziso reingwe raishandiswa izvi, zvakare mamwe makristasi ane mwenje mhedzisiro yekuyeuchidza yeziso akashandiswa izvi.
Tiger ziso Zodiac chiratidzo uye mwedzi wekuzvarwa
Izvo zvakanaka kusarudza kristaro inoenderana nechiratidzo chako chezodhiac. Ndokumbira utarise, izvi hazviwanzo kukwana. Dzimwe nguva kristaro iyi haishande kwauri panguva iyoyo.
Nyeredzi dzinogona kutibatsira kutitungamira mune zvemweya, nepo makristasi akasunganidzwa nepasi uye nekudaro achitibatsira kupora. Iko makristasi anotora simba kubva kune zvese zvinhu zvakatikomberedza.
Nyeredzi dzinotibatsira kudzidza zvakawanda pamusoro pedu nenzira iyi, makristasi anotibatsira kusimbisa nekuvandudza matarenda edu uye hunhu hwakanaka. Nokusarudza kristaro iri padyo nehunhu hwako kana inoenderana nemwedzi wako wekuzvarwa kana chiratidzo chezodhiac, ino kristaro inogona kushanda zvine simba.
Ziso reingwe rinofanana neboka renyeredzi Gemini na Leo.
Mhedzisiro yeziso reingwe kune mapoka enyeredzi
De Gemini dzimwe nguva ane hunhu hunopesana uye hwakaomarara. De Gemini ane simba uye ane bhizinesi, asi anogona zvakare kusagadzikana uye kuzvifunga. Tiger Ziso rinoona kuti simba rinotungamirwa mukati, kuitira kuti iwe ugone kuwana zvimwe kuzviongorora. Izvi zvinobatsira Gemini muhondo yake. Tiger Ziso rinobatsira iyo Gemini ine kusagadzikana, kupokana kwemukati uye maitiro asina chokwadi. Kutenda kudzikamisa uye kunyevenutsa mhedzisiro, ino kristaro inobatsirawo nekusagadzikana uko iyo Gemini inogona dzimwe nguva kusangana nayo.
De Leeuw haatyi kutora matambudziko, asi dzimwe nguva anotora njodzi dzakawandisa. De Leeuw zvakare dzimwe nguva anotora kutora kuzvidzora kana masimba masimba. Ziso reingwe rinotsigira Shumba kuti irambe ichitarisa uye kutora chinhambwe. Nenzira iyi de Leeuw anogona kumudzivirira kubva pakutora njodzi dzisingakoshi. Ziso reingwe rinokwanisa zvakare kubatsira shumba kuona mufananidzo muhombe. Izvi zvinovimbisa kuti anowana nzwisiso yakawanda maari uye kune vamwe, izvo zvinogona kudzivirira Shumba kubva pakuzvitutumadza uye / kana masimba masimba.
Kushanda kweziso reingwe
Makristasi ese ane mushonga wekuporesa munzvimbo dzakasiyana uye nenzira dzakasiyana. Pazasi ini ndinokurukura zvinoitwa nemavara uye nekristaro system. Uye zvakare, ini ndinokurukura nezvekuporesa mhedzisiro yeaventurine mune yemweya munda uye pesvedzero pane iyo chakras.
Ziso rembada rine trigonal crystal system. Izvi zvinoreva kuti ine grid iyo inogadzirwa kubva kumatatu. Izvi zvinotarisa uye zvinosimbisa simba uye zvinosimbisa uye zvinodzivirira yako aura.
Ziso reTiger rinosimudzira chakra yakakosha uye iro rezuva plexus chakra.
Yekutanga chakra inogara pazasi pemusana uye inobata nehupenyu hwedu hwekupona. Aya makristasi anobatsira kutsigira zvakanaka zvivakwa zveiyi chakra uye kushomeka zvisina kunaka zvivakwa zveiyi chakra. Hunhu hwakanaka: kuchengetedzeka kwekutanga, kushingaira, kuzvimiririra uye pfungwa yakasimba yesimba rako. Hunhu hwakashata: kusashivirira, kuda kufa, kutsiva, kutsamwa, kusagadzikana, kusagadzikana, kubata, kuita chisimba, kuwedzeredza kana kusava nesimba.
Iyo yezuva plexus chakra Iyo inzvimbo yepamoyo uye inopa kubatana kwepamoyo. Kana iyi chakra iri muchiyero iwe unonzwira tsitsi, wakarongeka, unoshanda uye unogona kushandisa mushe simba rako. Kana asisina chiyero, iwe unoita husimbe, unotora manzwiro nematambudziko kubva kune vamwe uye unoita zvakanyanya mumanzwiro kana, nekusiyana, unotonhorera zvakanyanya. Iwe haugone kuronga simba rako nekudaro hauchakwanise kuishandisa nemazvo.
Ruvara rweTiger ziso
Ziso reingwe rinenge riine shava regoridhe kana rakatsvukuruka. Iyo Tiger Ziso rinowira pasi peye brown, grey uye nhema makristasi. Aya makristasi anodonhedza simba risina kunaka uye anotsika muviri wenyama, achiita kuti vakodzere sevadziviriri.
Kushanda pamweya, kusaziva uye mweya
Ziso reTiger yakasimba uye inodzivirira sekristaro. Iyi kristaro inodzivirira iyo aura (simba remunda) kurwisa kusimba kwesimba nekunze kwekunze. Izvo zvinovimbisa kuti iwe unokwanisa kunongedza simba rako mukati uye kutarisisa pauri. Izvi zvinovimbisa kuti iwe uri nani kugona kuona iyo hombe mufananidzo uye zvinokupa iwe kuwedzera kunzwisisa mukati mako iwe nevamwe.
Tiger Ziso rinovimbisa kuti iwe unokwanisa kuchengetedza muongororo uye kuzviparadzanisa kubva pamamiriro ezvinhu anoita kuti iwe ugone kuzadzisa zvinangwa zvako. Ziso reTiger rinokurudzira kutarisisa uye intuition uye rinopa kuvimba, kushinga uye kutsungirira. Iyi kristaro inobatsirawo kubata ne (zvemukati) makakatanwa nematambudziko uye inovimbisa kushoma kwekusarudza uye maitiro asina chokwadi.
Iyo inozorodza uye inozorodza kristaro. Iyi kristaro zvakare ine maitiro akanaka pane hunhu kusagadzikana uye kushushikana kwekunzwa. Mukristaro kuporesa ingwe ziso rinonyanya kushandiswa kune kudziya maitiro. Izvi zvinokonzerwa nekusungwa kwesimbi ine ziso reingwe.
Iyo yegoridhe yero misiyano yezingwe ingwe ine kunyange yakatonyanya kunaka mhedzisiro pakukwanisa kuisa pfungwa uye kujekesa kufunga uye ikirisito yakakodzera kwazvo yekushandisa panguva yekudzidza / bvunzo nezvimwe.
Ziso dzvuku rembada rinomutsa (mukuwedzera kune zvakajairika zvivakwa) kusimba, kuda, simba rako uye simba rako pachako uye rinoshanda rakadzika.
Migumisiro yemuviri Tiger ziso
Ziso raTiger rine pesvedzero yakanaka pameso, nzeve, moyo, huropi, kutenderera kweropa, chiropa, huro, maronda emapapu, zvichemo zvemudumbu senge ura hwemudumbu, hyperventilation, kupererwa neropa, nhengo dzebonde, mhasuru uye asima. Ziso reTiger rine analgesic athari uye rinobatsira nekukakavara.
Iyi kristaro inobatsirawo neyakawedzera-yakasimudzira tsinga system. Ziso raTiger rinokurudzira kupora kwekupwanya kwemapfupa uye rine maitiro akanaka pane metabolism. Tiger Ziso rinotsigirawo akanaka mota hunyanzvi. Ziso raTiger rinodzivirira iyo aura kubva kune isina simba simba uye yekunze zvinokanganisa uye inomutsa chakra chakra uye solar plexus chakra.
Chokwadi chinoshanda uye chinonakidza
Muna 1886 panguva yeWitwatersrand Gold Rush, vanhu vazhinji vakaenda kuSouth Africa kunochera goridhe nemadhaimani. Meso mazhinji engwe akawanikwa panguva iyi, kunyanya munzvimbo yeGriquatown. Griquatown ichiri kuzivikanwa senge hombe ingwe ziso saiti.
Ziso raTiger raimbove rine zita rechiGiriki 'crocidolite'. Izvi zvinoreva waya yematare.
Tiger Ziso rinodzivirira imba yako kune vashanyi vasingadiwe kana iwe ukaisa Tiger Ziso pamusuwo wepamberi.
Ziso reTiger rinonyanya kuwanikwa muSouth Africa, India, Mexico, United States neAustralia.
Chete muzana ramakore rechi19 ndipo apo yero (ziso rekati kana chrysoberyl) uye ziso rebhuruu reziso (ziso rerukodzi) vakawana zita ravo pachavo kuitira kuti varambe vakaparadzana.
Mushonga weMishonga yeMamineral Uye Matombo Anokosha